Uyifaka njani iLubuntu 18.04 kwikhompyuter yethu | Ubunlog
UJoaquin Garcia | | Lubuntu, Tutorials, Ubuntu
Ubuntu 18.04 LTS ikhutshiwe namhlanje kwaye iyakwenza abasebenzisi abaninzi baqale ukuvuselela inguqulelo yabo Ubuntu. Iya kuba sisihlandlo kubasebenzisi abaninzi ukutshintsha ukuhambisa kwabo kunye nabanye ukuba batshintshe nendlela yokusebenza. Inkqubo ye- phucula e Ubuntu 18.04 ufakelo Yinkqubo elula kwaye ekhawulezayo yokwenza kodwa ayizukuba yinguqulelo esetyenziswa ngabantu abaninzi, kodwa iya kuba zizincasa zabo ezisemthethweni eziya kuphumelela. Kulungile kuba abaninzi bakhetha enye idesktop kwiGnome okanye ngenxa yokuba iikhompyuter zabo zindala noko kwaye azixhasi iimfuno zeGnome kunye ne-Ubuntu 18.04, iincasa ezisemthethweni ziya kuba ziinjongo zabasebenzisi abaninzi kwiikhompyuter zabo. Enye yeencasa ezisemthethweni iya kuba I-Lubuntu, incasa elula kodwa esebenzayo efumaneka kuye wonke umntu kwaye siza kuthetha ngantoni kweli nqaku ukukufundisa ukuba uyifaka njani kwaye uyiqwalasele kakuhle.
1 Kutheni ufaka uLubuntu 18.04?
2 Amanyathelo okufaka
3 Yintoni omele uyenze emva kokufaka iLubuntu 18.04
4 Kwaye ngoku ndinabasebenzisi abangaphantsi ko-Ubuntu 18.04?
Kutheni ufaka uLubuntu 18.04?
Ngokuqinisekileyo uninzi lwakho luya kuzibuza ukuba kutheni usebenzisa kwaye ufake i-Lubuntu 18.04 hayi olona hlobo luphambili lwe-Ubuntu okanye nayiphi na incasa esemthethweni. Isizathu soku kukuba uguqulelo lwamva nje lwe-Ubuntu luya kubangela ukuba iikhompyuter ezininzi ziyeke ukusebenza ngokuchanekileyo ukucothisa okanye ukungahambi kakuhle. Oku kungenxa yeemfuno zekhompyutha ezingaphezulu kuneenguqulelo zangaphambili. Nangona kunjalo, ILubuntu yincasa esemthethweni equlathe i-LXDE njengeyona desktop iphambili kunye neseti yeenkqubo ezisebenzisa izixhobo ezimbalwa. Ke, iLubuntu 18.04 yinguqu elula kwaye ilungele abo banamaqela anezixhobo ezimbalwa kwaye bafuna ukuhlala benobuntu.
Into yokuqala ekufuneka siyifumene ngumfanekiso wokufakwa kweLubuntu 18.04. Singakufezekisa oku ngokusebenzisa Indawo esemthethweni yeLubuntu. Nje ukuba sibe nomfanekiso we-Lubuntu ISO kufuneka siwugcine kwi-pendrive. Into elula ukuba sisixhobo Etcher, kodwa ukuba akunjalo singahlala siqhubeka Isikhokelo esiyipapashe ixesha elide.
Ngoku kuthweni sine-pendrive e-bootable enomfanekiso wofakelo lwe-Lubuntu 18.04 Kuya kufuneka siyifakele kwisithuba kwaye siqale kabusha ikhompyuter ngokuqala ngokulayisha ipendrive ngaphambi kwediski enzima, oku kuphunyezwa ngokucinezela iF8 okanye iF10 ngexesha lokuqalisa.
Isikrini esinjengalesi siza kuvela:
Ngoku sikhetha iSpanish kunye Cofa kwindawo ethi "Faka uLubuntu". Ngoku i-desktop izakulayisha nge-Lubuntu yofakelo lwewizard. Iwizard yofakelo sisixhobo esilula kakhulu. Kuqala kuza kuvela iscreen ngolu hlobo lulandelayo:
Kuyo siya kukhetha ukhetho "iSpanish". Cinezela eli qhosha lilandelayo kwaye isikrini esiza kulandela siza kuvela:
Ngoku kufuneka sikhethe ulwimi lwekhibhodi. Kule meko, kuzo zombini izikrini siphawula ukhetho "iSpanish" kwaye ucinezele iqhosha "qhubeka". Kwiskrini esilandelayo, into entsha iya kuvela enento yokwenza noBuntu obuncinci ukhetho. Kule meko sinokukhetha ezimbini:
Ukufakwa okuqhelekileyo okanye ukufakelwa okuncinci. Le yokugqibela iyacetyiswa kwiikhompyuter ngezixhobo ezimbalwa kwaye ine-desktop kuphela, isikhangeli sewebhu kunye nezixhobo ezisisiseko. Ukuba asinangxaki ngesixhobo sehardware, kungcono ukumakisha ukufakwa okuqhelekileyo kwaye ucofe iqhosha u "qhubeka".
Uhlobo loFakelo lwesikrini luya kuvela. Ukuba sine-hard drive engenanto, sikhetha ukufaka iLubuntu okanye iDiski yediski kwaye sifake iLubuntu kwaye ucinezele iqhosha lokuqhubeka. Ukuba sineenkqubo ezingakumbi zokusebenza okanye sigcina izahlulelo seKhaya, siya kuphawula "Iinketho ezininzi" kwaye siqwalasele izahlulelo kwiimfuno zethu. Isikrini sokufumana ngoku siya kuvela. SiseSpain ke siya kuphawula ukhetho lweSpain -Madrid kwaye ucofe uqhubeke.
Kwiskrini esilandelayo, siya kusicela igama leengcambu kunye negama lokugqitha, kunye negama lekhompyuter. Siyigcwalisa kwaye ucinezela iqhosha lokuqhubeka.
Ngoku isikrini siza kuncipha kwaye inkqubo yokusebenza iya kuqala ukufaka.
Kuxhomekeka kumatshini esinayo, inkqubo iya kuhlala ngaphezulu okanye ngaphantsi, kodwa ihlala iphakathi kwemizuzu engama-25 ukuya kwengama-40. Nje ukuba sigqibe ukufakela, siqala kwakhona inkqubo ukuze ilungele uLubuntu 18.04. Kodwa kusekho ukufakwa emva.
Yintoni omele uyenze emva kokufaka iLubuntu 18.04
Ukuhanjiswa kwe-Ubuntu kunye neencasa zayo ezisemthethweni kugqityiwe ukwabiwa kweGnu / Linux, kodwa ayikokuthanda okanye iimfuno zabo bonke abasebenzisi. Kungenxa yoko soloko kufuneka wenze imisebenzi yokufaka emva. Imisebenzi equka ukuhlengahlengisa iLubuntu 18.04 yethu kwiimfuno zethu. Ngaphandle kwale misebenzi, uLubuntu 18.04 uza kusebenza ngokufanelekileyo kodwa ngale misebenzi, uLubuntu 18.04 uya kusinika amandla apheleleyo osasazo.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuhlaziya inkqubo yokusebenza xa kunokwenzeka kubekho uhlaziyo olubalulekileyo okanye oluyimfuneko. Ukwenza oku sivula i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Omnye wemisebenzi yokuqala ekufuneka yenziwe emva kokuhlaziya i-repositories okanye ubuncinci endibenzayo kukufakwa kweekhomputha. Isiguquli siyinto ebalulekileyo kule mihla kodwa andazi ukuba kutheni kungenjalo zonke iifomati zihlala zisilele. Ke sivula i-terminal okanye i-LXTerminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Oku kuyakusifaka 7zip kunye neer rar decompressors, iifomathi zixhaphake kakhulu kwi-Intanethi.
Kwaye xa sithetha nge-Intanethi, isikhangeli sewebhu sokuhambisa yiMozilla Firefox kodwa kusenokwenzeka ukuba asiyithandi, kuba inemithombo embalwa okanye kuba sikhetha iChannel. Ke ukuba sifuna ukuyitshintsha, kufuneka sibhale oku kulandelayo kwisiphelo sendlela:
okanye ukuba sifuna into elula:
Inyathelo elilandelayo ekufuneka silenzile kukufakelwa kwesuti yeofisi. ILubuntu 18.04 iza ne-Abiword kunye neGnumeric, kodwa isenokungonelanga kubasebenzisi abaninzi. Kule meko kufuneka sifake i-LibreOffice. Ukwenza oku kwisiphelo sendlela siza kubhala oku kulandelayo:
Ukuba singabasebenzisi abanzima bokukhangela kwiwebhu, oko kukuthi, ukuba sikhangela i-Intanethi kuphela, kuyakufuneka ukufaka i-OpenJDK, umthombo ovulekileyo womatshini oqinisekileyo weJava. Ukwenza oku sivula i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Kwaye ngoku ndinabasebenzisi abangaphantsi ko-Ubuntu 18.04?
Ngayo yonke le nto siza kuba neLubuntu 18.04 kwikhompyuter yethu. Kodwa ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luya kuba nemvakalelo yokuba unabasebenzisi abangaphantsi kobuntu be-Ubuntu 18.04. Inyaniso kukuba akukho. Ngoku kukho ubuqu kunye nolungelelwaniso olupheleleyo lonikezelo kwiimfuno zethu kunye nezinto esizithandayo.
Yinto ekufuneka yenziwe ngabo bonke abasebenzisi bokusasazwa kweGnu / Linux, hayi abasebenzisi beLubuntu 18.04 kuphela. Kwaye ngaba ezo zinto zinjengekhompyuter, izixhobo zekhompyutha okanye uqhagamshelo lwe-intanethi zenza ukuba uLubuntu 18.04 kufuneka abhalwe ngaphezulu kunesiqhelo kodwa iziphumo ziya kufana nokuba sinoBuntu 18.04, awucingi? Kulungile ke zama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Lubuntu » Uyifaka njani iLubuntu 18.04 kwikhompyuter yethu
Ndisandula ukufaka ubuntu 18.04. Xa ndiyinika i-liveCD, yonke into isebenze ngokugqibeleleyo, kodwa xa ndifaka uqhagamshelo kwinethiwekhi ye-Wi-Fi iyavela, kodwa ayilayishi naliphi na iphepha. Ndifuna uncedo ukuze ndiyilungise. Enkosi
UDavid karal sitsho
Mholweni emini nje,
hlola entsha ku-lubuntu, bendifuna ukubuza kule distro, ngaba ikhona nayiphi na i-sortware yokwenza leri, ukwenza inkqubo ye-plc, enkosi kakhulu
Phendula kuDavid karal
usuku olungileyo, ndisebenzise i-lubuntu ukusukela ngo-2013 kwaye iyandonwabisa, kodwa xa ndifaka uguqulelo lwe-18.04 ndiye ndaqaphela izinto ezi-3 endifuna uncedo kuzo, 1 ukuqalisa kukhawuleza kakhulu kunenguqulo yangaphambili, 2 njengoko bendivavanya kwaye ndiyifaka ihlala ithatha indawo Imemori ngakumbi xa kuvalwa iifestile ilinde ukuphendula, kwaye into yokugqibela yayikukuba isidlali se-multimedia se-gnome-mpv sisebenze kube kanye kwifayile enye emva koko khange iqale kwaye ayivuli ukuvula ingxelo yempazamo. Ndivavanye ii-PC ezininzi kwimowudi ephilayo kunye nengxaki efanayo. nomdlali weendaba
NGU-JOSE MIGUEL ORTEGA CALERO sitsho
NDIKHUPHISE ILUBUNTU, XA NDANDIKHUTSHISA IFAYILI YENKCUKACHA YOMDLALO ANDIZI UKUBA NDIQHUBEKE NDENZA NTONI UKUFUMANA UMFANEKISO WE-ISO, ANDIBONI OPCIOBES INDLELA YOKUQHUBEKA NOMBULELO
Phendula JOSE MIGUEL ORTEGA CALERO
Ndikhuphela ukuze ndivavanye ukuba ihamba njani, ndiza kulandela umkhombandlela wakho olungileyo. Ndiyathemba ukuba iyasebenza.
Molo uJose Miguel, andiyongcali kodwa ndicinga ukuba le nto uyicelayo ilula.
Kuya kufuneka ukhuphele umfanekiso we-ISO kwiphepha elisemthethweni laseLubuntu (ulumke ukhethe i-32 okanye i-64 bits ngokuxhomekeke kumatshini apho ufuna ukufaka khona inkqubo). Okulandelayo kuya kufuneka ubeke i-ISO ekhutshelweyo kwisithuba se-2gb, usebenzisa inkqubo efana neLinux Live Usb (ndicinga ukuba ukwiWindows).
Emva koko cima ikhompyuter, faka ipendrive kwaye uyivule kwakhona. Ukuze i-PC iqale kwi-pendrive, kuya kufuneka uqwalasele i-BIOS ukuqala kwizibuko le-USB kuqala. Abanye bathunga kwaye bayacula.
Molo, ndiyifakile iLubuntu kodwa nangona ndiyitshintshile i-bios kwaye ndasusa ufakelo cd ngalo lonke ixesha ndivula i-pc ufakelo lwenziwe kwakhona, khetha ulwimi njl.
molweni ndiyabuza. Unjani umxholo we-lan, vga kwaye ezo zifakwe ngokuzenzekelayo njenge-win 10?
Indawo esemthethweni ye-lubuntu iwebhusayithi lubuntu.me, hayi lubuntu.net….
Mholo. Ndikwinkqubo yokufaka uLubuntu okanye ndicinga njalo. Ndiyilandele inkqubo kwaye ngoku ndibhala ndisuka kwikhompyuter endizimisele ukuyifaka.
Ndiyithetha le nto kuba ndicinga ukuba ibhaliwe kwi-skewer. Iqala kuphela kwaye iyasebenza ukuba ine-skewer on.
Andazi ukuba ndinethuba lokuyidlulisela kwikhompyuter? Kuthekani ukuba kufuneka ndilinde ukuba ilayishwe ngaphandle kokubeka i-skewer? Nokuba kuthatha iiyure ukulayisha. Okanye kuya kufuneka ndiqale yonke inkqubo kwakhona, ndenze into entsha enokubakho?
UJose Flores sitsho
Molo, ndinekhompyuter endala apho bendifuna ukufaka iLubuntu 18.04.5 Bionic Beaver LTS (LXDE), kodwa xa ndizama ukufaka, i-monitor (i-Monitor endala kakhulu, i-culón) indixelela ngaphandle. Ndiyazi ukuba umntu unokutshintsha ubungakanani bescreen, into endingayaziyo yindlela yokwenza ngayo ukufaka. Ikhompyuter yam endala inekhadi levidiyo le-512GB Nvidia kwaye ndine-2 GB ye-RAM, eyona indala yiprosesa, iPentium 4 1,8 Ghz. Ndingavuya ukuba umntu unesisombululo, ukubeka isikrini kwi-1024 x 768 kwi-60Hz, kwindawo yokufaka, enkosi.
Phendula uJosé Flores
Indawo esemthethweni yeLUBUNTU yokukhuphela umfanekiso ayisiyiyo eboniswe kwinqaku, kodwa oku: https://lubuntu.me/downloads/